Hargeysa: Dadka ku guulaystay tartanka sheeko iyo shaahid oo abaal-marino la guddoonsiiyay(Hadhwanaagnews) Wednesday, July 18, 2012 Tartamayaasha ku guulaystay tartanka sheeko iyo Shaahid ee sanadkan 2012 oo qayb ka ah bandhigga buugaagta caalamiga ah ee Hargeysa, ayaa xalay lagu Tartamayaasha ku guulaystay tartanka sheeko iyo Shaahid ee sanadkan 2012 oo qayb ka ah bandhigga buugaagta caalamiga ah ee Hargeysa, ayaa xalay lagu dhawaaqay.
Munaasibaddii xalay ee bandhigga buugaagta caalamiga ah ee Hargeysa ee ka socotay hoolka hayadda shaqaalaha ee magaalada Hargeysa, ayaa lagaga dhawaaqay dadkii ku guulaystay tartanka sheeko iyo shaahid ee sanadkan. Tartankan oo qayb ka ah bandhigga buugaagta, isla markaana u furan qof kasta oo ka qayb-galaya, ayaa sanadkiiba mar la qabtaa, waxaana dadweynaha ka qayb-galaa ay ku tartamaan qof
waliba sheekada uu doono. Taas oo qiimayn ku sameeyaan guddi loo xilsaaray.
Tartanka sanadkan oo ay ka qayb-galeen dadweyne tiro badan waxa wejigii hore u soo baxay kala-xulista lix qof, kuwaas oo qiimayn labaad oo mar kale la sameeyay ay ka soo baxeen saddexda qof ee kaalmaha hore galay. Munaasibaddii ku-dhawaaqista dadka guulaystay waxa ka hadlay Jaamac Muuse Jaamac oo ah agaasimaha seeska dhaqanka iyo suugaanta ee REDSEA CULTURAL FOUNDATION oo ah ururka soo qaban-qaabiya sanad walba barnaamijkan. Tartanka sheeko iyo shaahid waa tartan ay ka-qaybgalayaashu ku soo bandhigaan halabuurkooda la xidhiidha sheeko-qorista, waana halka ay ka soo baxeen in badan oo ka mid ah qorayaasha dayarta ah ee wakhtigani. Ayuu yidhi Jaamac Muuse Jaamac. Waxaanu sheegay in dhalinyarada sanadkan ka qayb-gashay tartankan ay habluhu kaga yar yihiin sanadihii hore, isaga oo ku dhiirigeliyay inay ka qayb-qaataan tartannada noocan oo kale ah.
Barkhad M. Kaariye kaariye104@gmail.com